‘हट एण्ड सेक्सी’ सबैलाई बन्न मनलाग्छ : उत्तम बनेपाली | Screennepal
२०७२, ११ माघ सोमबार ०७:३०screennepalUncategorized0
नेपाली फेसन डिजाइनरको नाम लिँदा नछुट्ने नाम हो उत्तम श्रेष्ठ ‘बनेपाली’ । दुईदशक भइसक्यो उनले फेसन पेसा अंगालेको । धरानको पुरानो बजारका श्रेष्ठ सानैदेखि सिर्जनशील थिए । जसका कारण उनलाई अरु भन्दा केही फरक र सिर्जनशील काम गर्ने मन पराउँथे । फलस्वरुप अहिले उनी नेपालका चर्चित र महँगा डिजाइनरका रुपमा पनि चिनिन्छन् । नेपालका सेलिब्रेटी, मिस नेपालदेखि साधारण व्यक्तिका लागि समेत उनले ड्रेस डिजाइन गर्छन् । उनले डिजाइन गरेका लुगा नलगाउने नेपाली सेलिब्रेटी छैनन् होला । (कुराकानी)
व्यस्तता त निकै छ जस्तो देखिन्छ नि ?
तपाईंले यताउति गरेको देखेर भन्नु भएको होला । मेरो दैनिकी त यस्तै हो । अलिअलि व्यस्तै छु ।
तपाईंको बुटिकमा आउने सेलिब्रेटी कस्ता छन् ? अहिले नयाँ काम के गर्दै हुनुहुन्छ ?
मेरोमा त कोमल वली, ज्योति मगर, मन्जु पौडेल, नम्रता श्रेष्ठ, प्रियंका कार्की, जीवन लुइँटेल, इन्दिरा जोशी, दीपाश्रीलगायतका सबै नै आउँछन् । अशिष्मा नकर्मी मेरो ब्रान्ड एम्बेसडर नै हो । मिस नेपाल २०१६ को कामको तयारीमा जुटेको छु ।
फेसन डिजाइन पेसा नै बनेको छ त ?
यो पेसा गर्नथालेको २० वर्ष भइसक्यो । सानैदेखि सिर्जनशील थिएँ । त्यसकारण अरु भन्दा फरक तरिकाको काम गर्न मन पथ्र्याे । त्यतिबेला घर धरानमा टेलर थियो । जहाँ मैले धेरै कुरा सिक्थेँ अनि दिदीहरुलाई पनि नयाँ डिजाइनका लुगा बनाइदिन्थेँ । तपाईंले सोधेजस्तो निकै गाह्रो त भएन । छोरा मान्छे भएर पनि के गर्छ यस्तो भनेर भन्ने पनि भएका होइनन् । त्यो बेला बुटिक खोल्छु भन्दा के हो त्यो भनेको भनेर सोध्नेहरु पनि थिए ।
तपाईं नेपालकै चर्चित र महँगा डिजाइर भनिन्छ नि ?
मैले त कसरी भनुँ चर्चित र महँगो छु भनेर । तर त्यस्तो महँगो पनि छैन । मान्छेलाई बुटिक महँगो हुन्छ भन्ने गलत भम्र परेको छ । त्यसकारण मान्छेलाई महँगो हुन्छजस्तो लाग्छ । तर मेरोमा ५,६ हजारदेखिका ड्रेस पनि पाइन्छ । आजभोलि ५,६ हजारको लुगा त तपाईं साधारण पसलमा गएर किन्दा पनि पर्छ नि ।
अधिकांश नेपाली सेलिब्रेटी तपाईंको मै आउनुहुन्छ । सबैभन्दा महँगो डे«स बनाउने सेलिब्रेटी को हो ?
हो, मेरोमा गायकगायिकादेखि नायकनायिका प्रायः आउनुहुन्छ । महँगो ड्रेस बनाउने भन्ने कुरामाचाहिँ सबैले आवश्यकताअनुसार बनाउनु हुन्छ । यसले नै भन्नेचाहिँ छैन ।
सबैभन्दा हट र सेक्सी ड्रेस कुन सेलिब्रेटीले बनाएका छन् ?
हट र सेक्सी त सबैलाई बन्न मन लाग्छ । मेरोमा चाहिँ ज्योति मगर नै हो । ज्योति बोल्ड छिन् । सेक्सी हट भन्दा पनि उनले बोल्ड नै डे«स बनाउँछिन् । कोमल वलीले अलि फरक किसिमको चाहनुहुन्छ । दीपाश्रीले डिजाइन सारै मन पराउँनुहुन्छ । उनले दाईले बनाएको डिजाइन लगाउँदा वजन नै घटेजस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ ।
कुनै नेपाली सेलिब्रेटी छन्, जसको लागि तपाईंले डिजाइन बनाउनु भएको छैन ?
मैले आर्यन सिग्देलको लागि डिजाइन गरेको छैन । त्यसबाहेक धेरै पुराना र धेरै नयाँहरुको गरेको छैन्।
२० वर्ष भयो, तपाईंले यो पेसा गरेको । आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा तपाईंले के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
हो, २० वर्ष भयो पेसालाई निरन्तरता दिएको । अहिले २५ जनालाई काम दिएको छु । अहिले पनि सेन्टर फेसन हब भनेर फेसन इन्स्टिच्युट खोलेर डिप्लोसम्म पढाइ भइरहेको छ । आगामी दिनमा ब्याच्लर हुँदै मास्टरसम्मको पढाई यही नेपालमा गर्ने सक्ने बनाउने योजनामा छु ।
तपाईंले डिजाइन गरेकामध्ये सबैभन्दा महँगो कतिसम्म बिक्री गएको छ ?
मैले डिजाइन गरेको ड्रेसमध्ये मलाइ याद भएसम्म एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा गएको छ ।
कुन क्षेत्रका सेलिब्रेटीले बढी खर्च गर्छन् ?
मैले परम्परागत पोशाक बढी बनाउने भएकाले पनि होला लोकदोहोरीकाले नै बढी खर्च गरेकोजस्तो मलाइ लाग्छ । किनकी उनीहरुलाई अलि बढी परम्परागतका पोशाक बढी चाहिन्छ नि ।
कति पए ठाउँमा हाम्रा सेलिब्रेटी कार्यक्रम एउटा पहिरन अर्को किसिमको लगाएर पुगिरहेका हुन्छन् ।
यो विषयमा तपाईं के भन्नुहुन्छ र कुन सेलिब्रेटीमा ड्रेसको सेन्स बढी छ ?
अब यस्तो छ, नयाँलाई अलि सेन्स हुँदैन । तर अहिले त धेरै परिवर्तन भएका छन् । हाम्रा सेलिब्रेटीहरु पनि । कार्यक्रमअनुसार नै पहिरन गरेका देखिन्छन् । यदाकदा केही त्यस्ता दृश्य देखिए पनि अहिले त त्यस्तो छैन । ड्रेस सेन्समाचाहिँ करिश्मा मानन्धर, दीपाश्री, कोमल वलीलगायतका धेरैलाई छ ।
तपाईंले नेपाल बाहिर कुन कुन देशमा पठाउनुहुन्छ ?
मेरो त नेपाल बाहिर धेरै नै जान्छ । किनकी बाहिर रहनु हुने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइले परम्परागत पोशाक अझ बढी रुचाउनु हुन्छ । मैले एचके, हङकङ, अष्टे«लिया, कोरिया, अमेरिकालगायतका देशमा पठाउने गर्छु ।
तपाईं एउटा डिजाइनरको नजरमा महिलालाई कुन पोशाकमा सेक्सी एन्ड हट देखिन्छ ?
एउटा मिनिस्र्कट लगाएकी महिला र साडी लगाएकी महिलालाई दाँज्ने हो भने । साडी लगाएकी महिला नै हट एन्ड सेक्सी देखिन्छन् । आखिर साडी लगाएकी महिलाले थोरै पेट मात्र देखाएकी हुन्छन् । तर पनि उनी हट एन्ड सेक्सी देखिन्छन् । महिलाले शरीर देखाउँदैमा हट एन्ड सेक्सी देखिने होइन । लुकाउदा पनि हट एन्ड सेक्सी देखिन्छ । एउटा महिला साडीमै रिच एन्ड सुन्दर देखिन्छन् ।
नेप्लीज डट ओरजीबाट साभार
Previous Postनिर्देशनमा व्यस्त हुँदै संगीतकार ओमप्रकाश (भिडियोसहित) Next Postप्रिन्स बने नवौ बिगबोस